Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विश्व क्यान्सर दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो (फोटो फिचर) – Emountain TV
विश्व क्यान्सर दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो (फोटो फिचर)
काठमाडौं, २१ माघ । विश्व क्यान्सर दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को आह्वानमा हरेक वर्षको फेब्रुअरी चारका दिन मनाइने विश्व क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको हो । अश्वस्थ जीवनशैली र खानपानलाई कारण मानिएको क्यान्सरका रोगिहरुको संख्या नेपालसहित विश्वभर बढ्दै गएको छ । क्यान्सर विश्वकै लागि चुनौति बनिरहेको छ ।
‘म सक्छु, हामी सक्छौँ’ भन्ने मूल नारासहित विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि क्यान्सर दिवस मनाईएको छ । सन् २०१२ मा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा २८ हजार ३ सय ६६ रोगीले उपचार गराएकामा यो संख्या सन् २०१७ मा ६८ हजार ४ सय ४१ पुगेको अस्पतालले जनाएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा क्यान्सर रोगीको संख्या डेढ सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार क्यान्सरका करिब ८० प्रतिशत बिरामी तेस्रो र चौंथो चरणमा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । सुरुकै चरणमा अस्पताल पुगे ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म क्यान्सर निदान गर्न सकिने क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरुके बुझाइ छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउने र सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट टाढा मात्र रहने हो भने ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ । तर, विभिन्न अध्ययनहरुले दिनप्रतिदिन क्यान्सर रोगी बढ्दै गएको देखाएको छ । यसको कारण पनि अस्वस्थकर जीवनशैली र सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा आएको बढोत्तरीलाइ मानिन्छ ।
नेपालमा क्यान्सर रोगका कारण वर्षेनी १५ हजारको मृत्यु भइरहेको छ भने वार्षिक ४० हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन् । विश्वव्यापीरुपमा ६ मध्ये एक जनाको क्यान्सरका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । अधिकांशमा फोक्सोको क्यान्सर देखिएको छ । क्यान्सर निकै खर्चिलो भएकाले खर्च, पीडा र संघर्षका कारण क्यान्सर पीडितहरुका लागि जीवन नैं अभिसाप बन्ने गरेको छ । विशेषज्ञहरु समय–समयमा स्वास्थोपचारका लागि निरोधात्मक शैलीका जाँच नगराउने गरेकाले पनि क्यान्सरको जोखिम झन बढीरहेको बताउँछन् । सर्वसाधारणमा पनि यसले केही चेतनाबढाउको छ । तर, त्यो पर्याप्त भने हुनसकेको छैन ।
नेपालमा फोक्सोको क्यान्सर, नाक, कान, घाँटी, आमाशयको क्यान्सर मुख्य समस्या बनेका छन् । त्यस्तै महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबैभन्दा बढी हुन्छ भने त्यसपछि स्तन क्यान्सर हुने गरेको छ । नेपालमा पुरुषभन्दा महिलालाई क्यान्सर रोग बढी देखापर्ने गरेको चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । क्यान्सर रोगबाट बच्नका लागि सरकारीस्तरबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने हरेक सर्वसाधारणले आफ्नोे जीवनशैली स्वस्थकर बनाउँदै खानामापमा ध्यान दिनु रसमयसमयमा चेकजाँच गराउँनु जरुरी छ ।